कस्ता कस्ता वक्षस्थल आकर्षण मानिन्छ ? – rastriyakhabar.com
कस्ता कस्ता वक्षस्थल आकर्षण मानिन्छ ?
महिलाको वक्षस्थल एक महत्वपूर्ण प्रजनन अंग मात्र होइन सुन्दरताकेा प्रतिक पनि मानिन्छ । त्यहीँ भएर होला महिलाहरु आफ्नो वक्षस्थलको सुन्दरताप्रति निकै सजग हुन्छन् । वक्षस्थलको स्वरुपले महिलाको समग्र सुन्दरतामा प्रभाव पार्छ ।
महिलाको बायाँ स्तन दायाँ भन्दा केही ठूलो हुन्छ । अमेरिकी शोधकर्ताहरुका अनुसार महिलाहरुको स्तनको आकार हरेक घण्टा घटबढ भइरहन्छ । कहिले त मिनेट मिनेटमै पनि । तर यस्तो परिवर्तन यति न्यून हुन्छ की महिलालाई थाहै हुँदैन ।
सोही पत्रिकाको अर्को एक अध्ययन अनुसार भोको पेट भएको बेला पुरुष ठूला स्तनतर्फ आकषिर्त हुन्छ भने टन्न खाएको बेला सानो वक्षस्थल मन पराउँछ ।